ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အများဆုံး တိရစ္ဆာန် (၁၀) မျိုး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အများဆုံး တိရစ္ဆာန် (၁၀) မျိုး
ကမ္ဘာ့ အန္တရာယ်အများဆုံး တိရစ္ဆာန် (၁၀) မျိုး
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jan 5, 2013 in Education, Environment | 23 comments
နံပါတ် (၁၁) – အစိမ်းရောင်မျက်နှာရှိသော…
ပထမဆုံး လာအားပေးသွားလို့ ..
နံပါတ် ၁၁ အစိမ်းရောင် မျက်နှာရှိသောဆိုတာ
ဘာကို ပြောတာလဲ သိဝူးးးနော့ ..
ကျုပ် ပြောတာ ၁၀ ကောင်းတည်းရယ်ပါ ..
ဘယ်က ၁ ကောင် ပိုလာဒါဒုံးးး
အဲ့ဒီ မျက်နှာဇိမ်းနဲ့ သွားအင်္ဂါမစုံဖြစ်နေဒဲ့တစ်ယောက်ကို ရှောင်ရမှာအေ့
နံပါတ်စဉ်ထဲမှာ ထည့်ဖို့ အတွက် နံပါတ်စဉ်တွေထဲပါအကောင်တွေက အဆင့်နိမ့်လွန်းနေလို့ 
သီးသန့် ဘေးဖယ်ထားရတဲ့ နို့ တိုက်သတ္တဝါတစ်ကောင်ရှိတယ်
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအမျိုးသမီးအားလုံးအတွက် အန္တရာယ်အကြီးဆုံးကတော့ ““ အုန်းစာတံ ”” ပါပဲ
( မှတ်ချက် = ခင်မင်မှုဖြင့် အပျော်သဘောပြောရုံသပ်သပ်မျှသာ ၊ တစ်ကယ်ယုံကြပါက ကျွန်ုပ် မဟုတ်မလုပ် မောင်ပေ နှင့် ဘာမှ မဆိုင်ပါကြောင်းးးးး ၊ အဲဒါ အဲဒါ )
ဟေ့လူ … ဟေ့လူ ..
စကားကို ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပေါဘာ …
အမှန်ဂ အုန်းစာတံ မဟုတ်ဘူး .. ပြောင်လေတဲ့ မေပေါင် ဘဲ …
အိုက်ဒါ ကျန်တွားလို့ … ငွင်းး ငွင်းး
သတ်ပစ်ချင်တဲ့ လူက ဘယ်သူတဲ့လဲ …
အားပေးသွားတာ ကျေးဇူးဘာ …
စိတ်ကိုလည်း ထိန်းပါလို့ …
အဆပေါင်းများစွာပိုပါတယ်၊ခေါင်းစဉ်က အန္တရာယ်အများဆုံးတိရိစ္ဆာန်ဆိုပေမယ့် ခန္ခာဗေဒသဘော
အရဆိုရင်လူဟာလည်း တိရိစ္ဆာန်တွေထက်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တစ်မျိုးပါဘဲ၊သူက (social animal)အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်၊
ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးက လူပါဘဲ၊ ခုတောင်မှကျွန်တော်လူတစ်ယောက်ကိုသတ်ပစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေ
ပုံတွေလှလိုက်တာ အဲဒါတွေကအထီးတွေလား အမတွေလား
အကုန်လုံးတော့ အမ မဟုတ်ဘူးဂျ …
မိကျောင်းဂျီးဂဒေါ့ အမ … ဒဲ့ …။
(၁) ခြင် ကိုတော့ အရမ်းမုန်းတယ်။
အရီးတို့ ငယ်တုန်းက မြန်မာပြည်မှာ ခြင် ဆိုတာ တောရွာမှာမှ ပေါတာ။
တော်ရုံမြို့ပေါ်မှာ တစ်နှစ် နှစ်ခါလောက် ဆေးမှုတ်တဲ့ ကားကြီး နဲ့ လမ်းတွေထဲ ဆေးတွေ ဖြန်းပေးတာ။
အခုတော့ အရင်ထက် ပိုပေါတယ်။
မီးပျက် မှောင်မဲမဲ ကတစ်မျိုး .. မြောင်းတွေကလဲ ပိတ်လို့ တစ်ဖုံ ..
အိမ်ပြန်တိုင်း ကိုယ်က ခြင်ကိုက်ခံရလဲ ဘာမှမဟုတ်ပေမဲ့ ကလေး မှာ အနာတွေဖြစ် အမာရွတ်တွေကျန်တာမို့
အဲဒါနဲ့တင် တစ်ခါတစ်ခါ ပြန်ဖို့ အတော်အားမွေးရတယ်။
ကိုယ်နေတဲ့ အရပ်မှာ ခြင်ထောင် ဆိုတာ မရှိတာမို့ ခြင်ဆိုတာ မရှိတဲ့ သဘောပါဘဲ။
ဘီလ်ဂိတ်စ် ကတော့ သူ့ ဟောပြောပွဲ တစ်ခုမှာ နားထောင်တဲ့ သူတွေ ထဲ ဘယ်သူမှ ခြင်ကိုက် မခံဘူး တာမို့ ဆိုပြီး ခြင်ပေါတဲ့ နေရာက သူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာနိုင်အောင် ခန်းမထဲ ခြင်တွေ လွှတ်ပေးဘူးတယ် ဆိုလား။
ဟောဒီမှာကြည့်။ ၂၀၀၉ တုန်းက။ အရမ်းဈေးကြီးပေးပြီး နားထောင်ရတဲ့ ဟောပြောပွဲမှာနော်။
“Bill Gates just released mosquitos into the audience at TED and said, ‘Not only poor people should experience this.'”
(၂) မြွေ ကတော့ သစ်တော သစ်ပင် များတာတိုင်းမှာ ပိုပေါနိုင်တယ်။
ငယ်တုန်းက ကျောင်းမှာ မြွေကိုက်ခံရရင် ဆိုပြီးတောင် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း သင်ခဲ့ဖူးတယ်။
အဖွားကတော့သင်ထားတယ်။ မြွေတွေ့ရင် မပြေးဘဲ နင်လဲ နင့်လမ်းနင်သွား၊ ငါလဲ ငါ့လမ်းငါသွားတာ။ နင့် ကို အန္တရာယ်မပေးပါဘူး။ ကုသိုလ်တွေကိုလဲ အမျှပေးပါတယ် လို့ ဆိုတဲ့။
(၃) ကင်းမြီးကောက် ကတော့ တွေ့ရင် စာအုပ်နဲ့ ထုဖူးတယ်။
(၄) ကြောင်ကြီး ကိုကတော့ တွေ့ရင် အမြီးကိုနင်း ဖနောက်နဲ့ ပေါက် တဲ့။
ဘီလ်ဂိတ် က အဲ့လိုဂျီးလားးး
အနော်ဒို့ဂဒေါ့ ခြင်ဆိုတာ ရိုးနေပါပြီ အရီးရေ …
ရွာဘက်မှာ ခြင်တွေ မရှိဘူးဗျ .. ကြမ်းပိုးတော့ ချိဒယ် .. အဟီးး
ခု နောက်ပိုင်းမှ ခြင်တွေ ရောက်တာတယ် ….
အားဖြည့်သွားလို့ ကျေးကျေးဘာ အရီး ခညာ …
အပွင့်လင်းဆုံးပြောရရင် မိကျောင်း. ဆိုတဲ့ သတ္တဝါကို မျိုးကန်းစေချင်တာပါပဲဗျာ.
သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆြာတွေ မေတ္တာပို့လည်း ခံပါ့မယ်.
ဒင်းတို့ ဘယ်လောက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ကောင်းကျိုးပေးတာလည်းမသိ.
ဆိုတော့ မသိတာတေ တအားများနေတယ်ဗျာ.
အဲ့ သိတာနည်းနည်းနဲ့တင်. ဒင်းတိုို့ကို သေဇီချင်မိတာ
လျှာမရှိလို့ သားကောင်ရဲ့ အရသာကိုမသိနိုင်တဲ့အပြင်
သေပီးသား သားကောင် ပုပ်မှ ယိရွဲမှ. စုပ်ယူအရသာခံနိုင်တယ် ဆိုတဲ့
(ခပ်တိမ်တိမ်လေ့လာမှုအရကရော ). ရွံတယ်ဗျို့ ထွီ.
မင်း မိကျောင်း.ကို စိတ်နာတာ သိနေဒယ်လေ။
မိကျောင်းမျက်ရည် ဆိုပြီး ဘူဒူ က စွပ်စွဲတွားရို့ရဲ။
အတော် မုန်းတာပဲ ……။
ကျုပ်လည်း မုန်းတယ် ….။
ပြီးတော့ ကြောက်လည်း ကြောက်တယ်ဗျို့ …။
ရွှံကြောက်လို့ ပြောရင် ရလေမလားပဲ ….
အားပေးသွားလို့ ကျေးကျေးဘာ ကိုဂီရေ …
ခြင် အကြောင်းလည်း လုပ်ပါအုံးလို့ ……..။
အထာ မပေါက်ဘူး … အဟီးးး
ရှေးဒဏ္ဍာရီထဲက.. နဂါးတဲ့..။ :harr:
.. ခြင်ကိုက်ခံရတာကို.. သွေးလှူတာလို့..ယူဆသူတွေရှိတယ်..။
…ခြင်တွေသေအောင်.. ဆေးဗူးနဲ့ဖြန်းတာကို.. အကုသိုလ်လုပ်တာဆိုပြီး.. သူကပဲ..မေတ္တာရှင်ကြီးပုံစံဖမ်းသူတွေရှိတယ်..
အကျိုးအကြောင်း.. တာဝန်ယူသလားဆိုတော့… မယူပါဘူး..
ခြင်ကိုက်လို့..ငှက်ဖျားကူးခံရပြီးလူသေရင်.. အနိစ္စ.. လို့..တွင်တွင်အော်ပေးပါတယ်..
သဂျီးပြောတဲ့သူတွေထဲမှာ မပါလို့ :hee:
တကယ့် အန္တရာယ်အများဆုံး သတ္တ၀ါက ဘယ်ပျောက်သွားတာလဲဟင်
တစ်လောကလုံးမှာ အန္တရယ်အရှိဆုံး သတ္တ၀ါ က
အိပ်ပြီးထ်ိရင်ရ တဲ့ “အိတ်..ထိ..ရ ” ဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါ
မိုက်လေး ကတော့ မြွေကို အမုန်းဆုံးပါပဲ
ချက်ချင်း အဆိပ့် တက်သွားလို့ဆိုပြီး လူတော်တော်များများသေးကြတာတွေ့ရပါတယ်.။
အဲ့ဒါကြောင့် မြွေဆိုရင် အရမ်းမုန်းပါတယ်..။
တိရိစ္ဆာန်မုန်းတီးရေးဝါးဖြန့်နေတဲ့ မဟာဘာဂျာ ကိုအရေးယူဘာ သဂျီး။
သူပြောနေတဲ့ အထဲမှာ ရှားပါးစာရင်းဝင်ပြီး မျိုးတုန်းတော့မယ်
၀က်ဝံသည်းခြေ၊ ၀က်ဝံသွေးနဲ့အရက်ရောသောက် အသက်ရှည် ခွန်အားကြီး ကိတ်စတေ……အလိုမရှိ
ကင်းမြီးကောက် အဆိပ်၊ မြွေအဆိပ်(အရှင်လတ်လတ်)အရက်ထဲရောခြင်း၊
ဆင်စွယ်လိုချင်လို့ ဆင်တွေကိုမိုင်းကွင်းထဲမောင်းသွင်းတာမျိုး (အာဖရိကမှာလုပ်တယ်)……အလိုမရှိ
ကြောင်မျိုးနွယ်ဝင် ကြီးကြီးသေးသေးတို့ရဲ့ အရေခွံနဲ့ အနွေးထည်ချုပ်ခြင်း…အလိုမရှိ
ခြင်တေကိုတော့ တွေ့ရာသင်းချိုင်း စပရေးမဆိုင်း(Jumbo Insect Killer Spray) ဖြန်းပါတယ်လို့ ..
အန် ဒ ရယ် ရှိတဲ့ အကောင်တွေပါလား.. ကြောင်ကြီး က နံပါတ် ၄ နေရာမှာ ယူထားတာပဲ.. သတိထားမှ..
နောက်တခါ တွေ့ရင် သူ မဦးခင် ကိုယ်ဦးအောင် အရင်ဆော်မှပဲ.. ဟိဟိ..